आइन्डहोभेन मा वकील Law & More - आईन्डहोभनमा अधिवक्ता
आइन्डहोभेन मा वकील
तपाईं एक उद्यमी वा एक निजी व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन कानुनी समस्याको साथ सामना गरिएको छ र के तपाईं यसलाई समाधान भएको हेर्न चाहानुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More, हाम्रा वकीलहरू तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छन्! मा Law & More हामी बुझ्छौं कि तपाईं उद्यमी हुनुहुन्छ वा निजी व्यक्ति, प्रत्येक कानुनी मुद्दा धेरै नै हुन्छन् र कुनै पनि कानुनी मुद्दाले तपाईंको जीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसो भए, प्रायः कानून फर्महरूको विपरित, Law & More तपाइँलाई थप केहि प्रदान गर्दछ। जहाँ प्रायः कानून फर्महरूसँग मात्र हाम्रो कानूनको परिभाषित क्षेत्रको ज्ञान हुन्छ र नियमित गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दछ, Law & More तपाइँलाई द्रुत सेवा र दुवै विस्तृत र विशिष्ट कानुनी ज्ञान बाहेक एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।
अन्वेषकमा मालिकको आवश्यकता छ?
तपाईं एक उद्यमी वा एक निजी व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन कानुनी समस्याको साथ सामना गरिएको छ र के तपाईं यसलाई समाधान भएको हेर्न चाहानुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More, हाम्रा वकीलहरू तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छन्! मा Law & More हामी बुझ्छौं कि तपाईं उद्यमी हुनुहुन्छ वा निजी व्यक्ति, प्रत्येक कानुनी मुद्दा धेरै नै हुन्छन् र कुनै पनि कानुनी मुद्दाले तपाईंको जीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसो भए, प्रायः कानून फर्महरूको विपरित, Law & More तपाइँलाई थप केहि प्रदान गर्दछ।
> आइन्डहोभेनमा कानून फर्म
जहाँ प्रायः कानून फर्महरूसँग मात्र हाम्रो कानूनको परिभाषित क्षेत्रको ज्ञान हुन्छ र नियमित गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दछ, Law & More तपाइँलाई द्रुत सेवा र दुवै विस्तृत र विशिष्ट कानुनी ज्ञान बाहेक एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, हाम्रो वकिलहरु पारिवारिक कानून, श्रम कानून, कर्पोरेट कानून, बौद्धिक सम्पत्ती कानून र अनुपालन को क्षेत्र मा विशेषज्ञ छन्। र जब यो कम्पनीहरूको कुरा आउँछ, Law & More उद्योग, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य सेवा र खुद्रा जस्ता विभिन्न शाखामा उद्यमीहरूका लागि कार्य गर्दछ। के तपाईं कानूनको अर्को क्षेत्र खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए कृपया हाम्रो विशेषज्ञता पृष्ठमा हेर्नुहोस् जुनमा कानूनका सबै क्षेत्रहरू सूचीबद्ध छन्।
को विशेषज्ञता Law & More आइन्डहोभनमा
कानूनी मुद्दाको प्रकार जस्तोसुकै, हाम्रो Law & More वकिलहरु मार्गदर्शन र कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया को अन्त सम्म सहायता गर्न को लागी सक्षम छन्, एक राम्रो सोच-सोच, उन्नत रणनीति मा आफ्नो काम को आधार मा। हाम्रो कानून फर्मले दुबै कम्पनीहरू र निजी व्यक्तिहरूलाई कानुनी विवाद समाधान र लिटि services्ग सेवाहरू प्रदान गर्दछ र अवसर र जोखिमहरूको राम्रो सन्तुलित मूल्याments्कन गर्दछ जुन सबै कानुनी प्रक्रियाहरू भन्दा अघि नै हो। र जब यो कानुनी प्रक्रियामा आउँछ, आइन्डहोभनका हाम्रा वकिलहरू तपाईंको लागि लड्नेछन्। जे भए पनि हामी विश्वास गर्दछौं कि सबैलाई आफ्नो अधिकारको लागि खडा हुने अवसर हुनुपर्दछ। यसैले हामी हाम्रो ग्राहकहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो मूल्य-गुणवत्ता अनुपातको लागि प्रयास गर्दछौं, ताकि तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको लगानीले आफैं भुक्तान गर्नेछ। यद्यपि Law & More एक सल्लाहकार र मुद्दा चलाउने सल्लाहका रूपमा कानूनी सेवाहरू मात्र प्रदान गर्दछ तर यो एक स्पार्निंग पार्टनरको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
आइन्डहोभेनमा कानून फर्म
थप, डच (प्रक्रियात्मक) कानूनको हाम्रो व्यापक ज्ञानको थपमा, हामीसँग धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू छन्। हाम्रो कार्यालय यसको सेवाहरूको क्षेत्र र प्रकृति को हिसाबले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय छैन, तर उन्नत स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूको दायरामा पनि छ। हाम्रा ग्राहकहरुलाई उत्तम सम्भव सेवा प्रदान गर्न हामीसंग बहुभाषी वकिल र न्यायशास्त्रीहरूको समर्पित टोली छ, जसले रुसी भाषाको मास्टर गरेका छन् र अन्य कुराहरु पनि। त्यसो भए, तपाईं एक विदेशी एक विदेशी कम्पनी हो वा एक निजी व्यक्ति वा तपाईं एक विदेशी समकक्षीको सम्बन्धमा कानूनी मुद्दाको सामना गर्दै हुनुहुन्छ कि, Law & More वकीलहरु तपाईका लागि छन्! के तपाइँ हाम्रो कार्य गर्ने विधिको बारे उत्सुक हुनुहुन्छ र हामी तपाइँको लागि के गर्न सक्दछौं? कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
त्यसोभए, के तपाईं ठूलो कर्पोरेट अफिसको ज्ञानको खोजीमा हुनुहुन्छ? तर के तपाईं अझै पनि सानो बुटीक अफिसको जस्तो व्यक्तिगत सम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ? त्यसो भए Law & More तपाइँको लागि आइन्डहोभेन कानून फर्म हो। Law & More आइन्डहोभनको साइन्स पार्कमा अवस्थित एक गतिशील, बहु-अनुशासित कानून फर्म हो, नेदरल्याण्डको सिलिकन उपत्यका पनि भनिन्छ जुन स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरू, कम्पनीहरू, संस्था र व्यक्तिहरूको विस्तृत श्रृंखलाका लागि काम गर्दछ। आइन्डहोभनमा हाम्रा वकिलहरूले तपाईंलाई अन्य कार्यालयहरू भन्दा बढी सेवा प्रस्ताव गर्दछन्। उदाहरणको लागि, हाम्रो आइन्डहोवेन अफिसमा लामो खुल्ने समय छ र हामी साँझ र सप्ताहन्तमा पनि खुला छौं (सोम / शुक्र 8.00..०० - २२.००, शनिबार / सो 22.00 .०० - १ 9.00.००)। यसका साथै, हामी सकेसम्म छिटो काम गर्ने बानीमा आएका छौं, त्यसकारण तपाईंले आफ्नो मेलको उत्तर दिन वा फोनमा हाम्रो कर्मचारीहरू मध्ये एक हुनु भन्दा पहिले तपाईंले लामो कुर्नु पर्दैन।